High Pressure Water Jet အား ကမာရွတ် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
သင်္ကြန်အမှီ ရေကစား နိုင်ဖို. High Pressure Water Jet
လေးကို Rocket မှာ ရောင်းချပေးနေပါပြီ။
ကားအောက်ပိုင်း ရေပြင်းပြင်းနဲ. ဆေးဖို.
ကြမ်းခင်းက အစွန်းတွေကို ရေပြင်းပြင်းနဲ. ဆေးဖို.
ရေအား ပြင်းပြင်းကို သုံးချင်သူများအတွက်
High Pressure Water Jet လေးပါနော်။
ဈေးနှုန်း =15500 ကျပ် (150ml)💰💰
SUPER JET NOZZLE
အမည်: High Pressure Water Jet